Mpamokatra takelaka takelaka taratasy - Mpanamboatra sy mpamatsy takelaka China Paper Bowl
Eco Friendly Yogurt Cup Heat Seal Lids Pet PET Sakafo Kilasy Fitaovana
Ny Heat Seal Lids dia manana fananana avo lenta sy mahazaka rano, ka mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny sehatra maro. Heat Seal Lids dia mihatra amin'ny PS / PP / Paper / PET Cup. Ny lalana misamboaravoara dia mahatonga ny vokatra ho voarindra kokoa sy manatsara ny sandan'ny vokatra. Saron-tava ho an'ny fonosana fonosana toy ny yaourt, ronono, fromazy, gilasy, rano, ranom-pisotro, kafe, dite, sakafo, paty, tarehy, zava-manitra, K-cup, kapsily kafe sns. Fanamafisana tsara sy fananana sakana. Fanoherana tsara amin'ny mari-pana ambony. Misy habe sy firafitra samihafa misy.
Fitaovana avo lenta Noodle Bowl tampony PET fitaovana plastika
Ny tombo-kase lovia paty eo no ho eo dia Thinner, milamina kokoa ary mangarahara - ho an'ny fonosana fromazy, yaorta ary vokatra vita amin'ny ronono hafa, dia manolotra vahaolana manarona avo lenta sy miasa miorina amin'ny PET miaraka amina toetra mekanika sy optika tena tsara. Ny portfolio misy patanty dia miavaka amin'ny fantsom-panafahana avo sy ny fanoherana ny ranomaso ary koa ny mangarahara sy mazava. Ireo fonosana dia azo sokafana mora foana ary tsy tapaka; ny savony tsy triatra.
Taratasy tombo-kase lozisitra taratasy tampoka karazana voasarimakirana
4-Fampiasana: paty instant, kaopy yoghurt PP / PE na kaopy rano
5-fonosana: fonosina anaty pcs sy horonana amin'ny baoritra
Fanoherana solika PP tombo-kase ho an'ny tombo-kase paty paty
Ny tombo-kase PP dia manolotra safidy azo atao tontolo iainana. Ny akora rehetra ampiasaina amin'ny sarony dia avy amin'ny loharano maharitra. Ny sarony mifototra amin'ny PP dia azo averina madiodio tanteraka ary manana dian-karbaona ambany.
Mpanamboatra sinoa ny takelaka vita amin'ny kaopy plastika PP avy any Shina
● sakana avo manoloana ny etona misy rano & fifindran'ny oxygen ary koa ny hazavana sy ny hanitra ka mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny vokatra fiainana mora tohina sy lava
● Fametahana sary famantarana ary koa lamina mahazatra toy ny grub sendra sy rongony tena manify
● Fampiharana peel na savoka mora
● Fanoherana avo ny vokatra
● Fanatsarana ny fanapoahana puncture sy ny fanoherana ny ranomaso
● Miovaova sy mora ampiasaina
Sarony avo lenta Instant Noodles PP Plastika amidy
1. Fanamafisana foil amin'ny roul.
2. Toetra sakana tsara.
3. Fanontana pirinty mazava sy mazava. Fanontana miloko 0-10.
4.Matetika matevina: 50-70micron
70. Taratasy miloko habe namboarina ho an'ny takelaka lovia eo ho eo ho an'ny famehezana paty eo no ho eo
Mamoaka takelaka haingam-pandeha avo lenta izay ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny sakafo sy ronono. namboarina tamin'ny sary, fampahalalana, logo ary pirinty araka ny fepetra takian'ny mpanjifanay
2-Plastika: PE / PET
5-Fampiasana: kaopy paty na kaopy misy rano ny PP / PE
38 40 micron Noodles Instant hafanana famehezana taratasy lovia Takela-by Biodegradable
Ny takelaka amin'ny takelaka famehezana antsika dia mety amin'ny PET (polyester), PE (polyethylene), PP (polypropylene), PVC (polyvinyl chloride), PS, ABS, vera, sns, ny karazana tombo-kase fitoeran-javatra rehetra, rakotra takelaka hafanana be mpampiasa amin'ny sakafo , fanafody, kosmetika, akora simika amin'ny fambolena, solika, detergent, vokatra fikolokoloana volo, alikaola ary indostria hafa, miaraka amin'ny famoahana, fitehirizana, metamorphisme, proof-hamando, sns.